Shirka Bini'aadaminimada oo Istanbul ku soo xirmay - BBC Somali
Shirka Bini'aadaminimada oo Istanbul ku soo xirmay
Shirka caalamiga ee bini’aadaminimada ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waa shirkii ugu horeeyay ee noociisa ah oo uu ku baaqay xoghayaha ee qaramada midoobay si wax looga badallo sida caalamku ula tacaalo dhibaatooyinka bini’aadaminimo oo kuwoodii ugu dambeeyay ay ka mid yihiin qaxootiga dalka Syria. Abdirahman Koronto, oo BBC uga soo waramayay shirka, ayaa warbixintan nooga soo diray.
Xoghayaha guud ee qaramada midoobay, Ban Ki Moon, ayaa sheegay guud ahaan shirku uu horumar ka sameeyay dhinaca ballanqaadyada, waxaa ka soo qaybgalay wufuud ka kala socotay 173 dalka, iyadoo guud ahaanna dad ka badan 10,000 ay ku sugnaayeen xarunta shirka oo muddo laba maalmood ah socday.
Ban Ki Moon, ayaa sheegay in ilaa 1500 oo ballanqaad laga soo jeediyay shirka, kuwaaso oo qorshuhu yahay in ay keeni doonaan in wax wayn iska badalaan qaababka wax ka qabshada dhibaatooyinka kala duwan ee bini’aadamka, oo in badan oo ka mid ah ay yihiin kuwo ay dadku sababeen.
Xoghayaha guud, wuxuu rajo xumo ka muujiyay in hogaamiyayaasha dalalka deeq bixiyayaasha ugu waawayn ay goobta ka maqnaayeen. Waxaa ka mid ahaa hogaamiyaha dalalka ku bahoobay G7, oo ra'iisul wasaaraha Jarmalka, Angela Merkel oo kaliya ay ka joogtay. Madaxwaynaha dalka Turkiga, Tayib Erdogan, ayaa xusay in wax ka qabsho la’aanta bini’aadaminimada aysan ahayn mid ku timid dhaqaale yaraan, balse ay la xiriirto naxariista oo yaraatay, Wuxuu sheegay in dalka Turkigu ay ku sugan yihiin boqolaal kun oo qaxooti Syrian iyo Iraaqiyiin ah, ayna yar tahay caawinaadda dibedda ee ay helaan.
Wuxuu sheegay in Turkiga uu dalal dhowr ah oo Soomaaliya ay ku jirto ay ka fuliyeen nooc horumarineed oo Turkiga u gaar ah.
Wufuudda dowladaha, hay’adaha gargaarka, kuwa aan dowliga ahayd, waxay muujiyeen in rajo ay jirto, balse loo wadajoogo in sida looga soo baxo ballanqaadyada dowladuhu qaadeen si wax looga badalo habka loola tacaalo dhibaatooyinka bini’aadaminimo.